मेलम्ची आयोजना Archives - Lokpati.com
Tag - मेलम्ची आयोजना
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आयोजना सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरिरहेको जनाएको छ। केयुकेएलले समग्र खानेपानी तथा आपूर्ति...
विकास/निर्माण • सरकार
काठमाडौं। बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममध्ये पूर्वखानेपानी मन्त्री बिना मगरको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी प्रगति भएको देखिएको छ। आयोजनाले विभिन्न समयमा जारी गरेका तथ्यांकहरुले पूर्वमन्त्री मगरको कार्यकालमा...
चैतसम्म मेलम्ची काठमाण्डौं ल्याईने तयारी
चौतारा । रााष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी चैतसम्म राजधानी पुर्‍याइने भएको छ ।
गत असारमा सुरुङमा समस्या देखिएपछि त्यसलाई सुधार गरी सुरुङको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भए पनि विभिन्न चरणको प्राविधिक परीक्षण गर्न समय लाग्ने...
रमेश लम्साल, काठमाडौं, १२ असोज, (रासस)। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्ग लगायतको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आज सम्झौता भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको...
चरित्रहत्या गर्नेहरु कानूनको दायरामा उभिनुपर्छ : मन्त्री मगर (विज्ञप्ति)
काठमाडौँ, १३ चैत । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्वाध रुपमा अगाडि बढाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको खानेपानी मन्त्री बिना मगरले स्पष्ट पारेकी छिन्।
मन्त्री मगरले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मन्त्री...
सिएममी फर्काउन अवरोध गरेपछि सचिव ठाकुरको सरुवा
काठमाडौं, ७ फागुन । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनि सिएमसीलाई काममा फर्काउने चाहेकोमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले अवरोध गरेपछि मन्त्रीपरिषदको बैठकले उनलाई सरुवा गरेको छ ।
बिना मगरका ११ महिना : ५१८ योजना सम्पन्न (प्रगति विवरणसहित)
काठमाडौं, २९ माघ । कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नं.–१ बाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेर आएकी बिना मगरले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ११ महिना पुगेको छ ।
बिना मगर २०७४ चैत २ गते खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् ।...
मेलम्ची आयोजना : सिएमसी नै काममा फर्किन सम्भव छ ? (विश्लेषण)
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बहुप्रतिक्षित आयोजना हुनुका नाताले मेलम्चीप्रति सबैको चासो र सरोकार रहेको छ । पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनिले...
मेलम्ची आयोजना : के गर्दैछिन् मन्त्री बिना मगर ?
केही समयअघि मेलम्ची ठेकेदारले बहाना बनाएर भाग्न खोजेपछि खानेपानी मन्त्रालय निकै चर्चामा आयो । समाचार आएलगत्तै खानेपानी मन्त्रीले ठेकेदार कम्पनीलाई विदेश भाग्नबाट रोकिन । यो तत्कालमा लिइएको एकदमै सही निर्णय थियो ।